Maxaa laga filan karaa wada xaajood 3 maalmood ah oo dhexmara DF & Puntland? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa laga filan karaa wada xaajood 3 maalmood ah oo dhexmara DF & Puntland?
A warsame 11 October 2014 20 October 2014
Mareeg.com: Shir wada xaajooda h oo socon doonta muqddo 3 maalmood ah ayaa manta magaalada Garowe uga furmay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Waxaa si wadajir ah furitaanka shirka uga qeybgalay Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya Cabdiwali Shiikh Axmed iyo madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas.
Guddiyo labada dhinac matalaya oo gaaraya 15-xubnood ayaa howsha xoogeeda ka doodaya sida maanta furitaanka shirka lagu sheegay.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaa sheegay inay farxad wayn u tahay wada xaajoodka Garowe uga furmay DF iyo PL, wuxuna sheegay inay muhiim tahay in si hufan looga wada hadlo arrimaha la isku hayo.
Puntland ayaa wada xaajoodkan kusoo bandhigaysa qodobo ay ka mid yihiin wax ka badalka lagu sameeyay dastuurka qabyada ah, xaq ays heegtay inuu Puntland uga maqan yahay DF ah, aqoonsiga shahaadada dugsiga sare iyo cadaynta sida uu noqonaya mamulka gobalada dhexe ee Mudug iyo Galgaduud.
Ra’iisul Wasaraha Somalia Cabdiwali Shiikh Axmed ayaa labada guddi ee is hor fariisanaya maalmaha uu shirku socda ugu baaqay inay si daacadnimo ku jirtu iskula lafo guraan arrimaha khilaafka keenay ee mar kasta dib usoo celinaya, wuxun sheegay inay meesha ku jirta daruufaha ku xeeran Villa Somalia iyo Garowe.
“Waxaan leenahay aqoontii iyo khibradihii aan heshiis ku gaari lahayn, waana in heshiisku noqdaa mid waaqici ah oo la fulin karo. Labada ergo ee wada hadlaya waad is beddeleyssaan oo qayb Federaalka ka tirsan ayaa hadhow halkaan ka shaqayn doona, halka kuwo Puntland ka shaqeeyana ay ka hawlgeli doonaan Federaalka markaa waa inaad ka shaqaysaa wax aan berri caqabad kugu noqon doonin” ayuu R W Cabdi Weli Sheekh Axmed.
Lama oga natiijada kazoo bixi doonta shirkaan oo xitaa la khalday borotokoolka loo qoray bookiisasa, iyadoo lagu qoray “Shirka Wada Xaajoodka Dowladda Puntland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya”.
Puntland waa dowlad goboleed hoostimaadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, marka sida borotokoolka ah waa in qoraalka lagu hormayo Dowladda Federaalka ah.
Madaxweyne Xasan oo tegay Baraawe “Ma ogolaan doono dhoofinta dhuxusha”
Akhri: Turkiga oo dowlada Soomaaliya u bilaabay lacagtii farasaarka aheyd